Mashruuca Sümela Teleferik si loo Hirgaliyo | RayHaber | Wadada Tareenka | Wadada weyn | cable baabuur
HomeTURKEYGobolka Banaadir61 TrabzonMashruuca Sümela Teleferik in la hirgaliyo
Mashruuca Sümela Teleferik in la hirgaliyo
08 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 61 Trabzon, GUUD, Gondola, Gobolka Banaadir, Headline, TURKEY, TELPHER 0
mashruuca gaariga xamuulka ah ee sumela nolosha ayuu yimaadaa
Qiimaynta Dalxiiska iyo Shirka Qorshaynta 2020 ayaa lagu qabtay Trabzon.
İsmail Ustaoğlu, Gudoomiyaha gobolka Trabzon, Murat Zorluoğlu, Duqa magaalada TTSO, Suat Hacısalihoğlu, Agaasimaha Gobolka ee Dhaqanka iyo Dalxiiska, Ali Ayvazoğlu, Xoghayaha Guud ee Wakaaladda Horumarinta Badda Madow, Mudane Adıyaman iyo wakiilo dalxiis ayaa ka soo qeyb galay kulanka. Kulankii lagu qiimaynayay Trabzon iyo dalxiiska gobolka iyo qorshaynta 2020, Agaasimaha Dhaqanka iyo Dalxiiska Gobolka Ali Ayvazoğlu iyo khubarada DOKA Fikri Akkaya ayaa soo bandhigay.
Isaga oo ka hadlaya kulanka, Duqa Magaalada Trabzon ee Magaalada Magaalaga Murat Zorluoğlu, intii uu samaynayay qiimayn cajiib ah, wuxuu siiyey ka qaybgalayaasha warbixin ku saabsan shaqada. Aragtida gobolka ee Zor waa mid aad muhiim ugu ah dalxiiska. Waa inaan eegnaa dalxiiska kaliya maahan Trabzon laakiin waa gobol ahaan. Waa inaan iskaga tagno khilaafaadka foosha xun ee udhaxeeya gobolada dhinacna aan iscaawinaa oo aan isbarbar dhigaa keega. Waxaan aragnaa in loo baahan yahay in lagu maareeyo dalxiiska heer gobol iyo heer gobol oo aan diiradda saarno tan. Annaga oo ah Dawlada Hoose ee Magaalada Trabzon waxaan aad u xiiseyneynaa dalxiiska. Waxaan u beddelnay magaca waaxdayaga Waaxda Dhaqanka iyo Dalxiiska. Waxaan sidoo kale abuurnay Agaasime waaxeed Dalxiis oo madax banaan. ”
SÜMELA WAA CAAWIN KARA
Isaga oo ka hadlaya monastery-ka Sumela, Zorluo saidlu wuxuu yidhi, “Waxaan rajeynayaa in 2020 dib loo soo celin doono gabi ahaanna loo furi doono booqdayaasha. Waxa jira mashruuc baabuur koronto ah oo aan muhiimad weyn u leenahay. Waxaan eegnay mashruuca. Waxaan sameynay taabasho gaar ah oo ku saabsan faahfaahinta. Waxaan rajeyneynaa, inaan ka shaqeyn doonno inaan ka dhigno Altındere Valley goob dalxiis oo dhab ah oo leh labadeena gawaarida fiilooyinka ee u socda Sumela. Waxaan u soo bandhigi doonnaa mashruuca xarig-isweydaarsiga jidka Swaymela ee muddada dhow
BOZTEPE WUXUU YAHAY Aqoonsi Cusub
Duqa magaalada Zorluoğlu ayaa yiri, waxaan rajeynayaa in Masjidka Hagia Sophia la dhammeystiri doono oo loo furi doono booqdayaasha May 2020. Gülcemal waa mashruuc muhiim ah. Waxaan wali la tacaalnaa qalcadaha horteeda. Gülcemal 1 ee 2020 hadda waxaan dooneynaa inaan dib u soo nooleeyo oo aan dhaqso u hirgalinno. Waxaan u naqshadeyneynaa meel muhiim u ah booqdayaasha Trabzon inay waqti ku qaataan bartamaha magaalada. Habaynta xeebta ayaa muhiim ah mar labaad. Waxaan faragelin ku sameyn doonnaa Boztepe mashruuc cusub. Waxaan rajeynayaa in Boztepe yeelan doono aqoonsi gabi ahaanba ka duwan. Waxaan danaynaynaa iftiinka. Shaqada iftiiminta darbiyada ayaa hada socota. Waxaan iftiimineynaa Uzunsokak iyo Kunduracılar Street. Waxaan sameynay hindise loogu talagalay dayactirka dhismayaasha dhammaan dhinacyada hore ee barxadda. ”
MAGAALADA DHAQANKA MA AHAN KARAAN HOOSE
Lu Waxaan muhiimad weyn u leenahay howlaha dhaqanka iyo farshaxanka. Waxaan taageernaa xaflado. 2020, gaar ahaan xilliyada dalxiiska, waxaan rabnaa inaan abaabulno hagida dhacdada Trabzon qaab bille ah oo aan u gaarsiinno dalxiisayaashayada iyo shacabka. Waxaan qabnaa in magaalooyinka caajiska aysan horumarin karin marka loo eego dalxiiska. Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska 'Trabzon 3. magaaladii ka hel 'ayuu yidhi. Waan ka shaqeynaynaa. Cabashooyinka ayaa taga wasaaradaha dalxiisayaasha. Waqtigan xaadirka ah, waa inaanu la nimaadno dhinacyada oo aan go'aansanno nooca barnaamijka xisaabinta aan ka qaban doonno ganacsatada siiya adeegyada dalxiisayaasha 2020. ”
Agaasimaha Gobolka Dhaqanka iyo Dalxiiska Ali Ayvazoğlu 2019 ee Trabzon bishii ugu horreysay ee 10 bishii 339 milyan 248 kun oo doolar dakhliga dalxiiska, ayuu yiri. Ayvazoğlu, oo qiimeynaya sanadka 2019, ayaa yiri, "Waxaa jira xarumo 597 ah oo ku yaal Trabzon oo hoos yimaada magaca shirkada dalxiiska iyo shahaadada maalgashiga, shahaadada degmada iyo tas-hiilaadka gobolka Dalxiiska ee Uzungöl waxayna u adeegayaan 35 kun oo 636 sariirta awoodda ah. 2019, Macluumaadka Dalxiis waxaa booqday 9 kun oo 389 dalxiisayaal ah oo ay ku jiraan 20 kun oo 465 ah iyo shisheeye 29 kun 584. Intaa waxaa dheer, lixdii bilood ee ugu horreeyay 2019, tirada rakaabka ee tagaya garoonka diyaaradaha dadweynaha waa 1 milyan 490 kun 882 oo khadadka maxalliga ah iyo 201 kun oo 410 qof oo khadadka caalamiga ah, wadarta guud ee 1 milyan 692 kun 286 qof dış.
Khariidadda of Turkey Cableway
Gümrükçüoğlu: "Mashruuca Xariga Furiinka Sümela"
Osmaniye - Zorkun Mashruuca Telefericiga ah
Mashruuca Xawaaladda ee weyn ee Talyaaniga-TÜYAP
Mashruuca Dhismaha Bursanin Urban
Mashruuca Tareenka ee Samsun
Mashruuca Haramain High Speed ​​Train Project wuxuu bilaabayaa 2018
II. Abdulhamid Rijadiisa Hejaz Railway Amman Tareenka Taagan ayaa Soo Laabanaya